ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောမျက်နှာဖုံး - Orich ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ(Tianjin) ကုမ္ပဏီလီမိတက်
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် /ထုတ်ကုန်များ /ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမဟုတ်သောမျက်နှာဖုံး
[ထုတ်ကုန်အမည်] N95 နှာခေါင်းစည်း
[မော်ဒယ်နှင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်] N95 160mm×105မီလီမီတာ
[ကုန်ကြမ်းများနှင့်အချိုးအစား] Non- ယက်ထည် 44%, အရည်ပျော်သောထည် 28%, ပူလေထုဝါဂွမ်း 28%.
[ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့်]မဟုတ်သောအဆီပြန်မှုန်များအတွက် filter ≥95%
[ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းမှု] အဆိုပါမျက်နှာဖုံးမျက်နှာဖုံးကိုယ်ခန္ဓာ၏ရေးစပ်သည်, နှာခေါင်းကလစ်နှင့်မျက်နှာဖုံးခါးပတ်.
3. မျက်နှာဖုံးခါးပတ်တစ်ခုစီနှင့်မျက်နှာဖုံးအကြားဆက်သွယ်မှုနေရာ၌ပြိုကွဲနေသောအစွမ်းသည် 10N ထက်မပိုစေသင့်ပါ.
[လျှောက်လွှာများ scope] ဤထုတ်ကုန်ကိုလူအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဘဝတွင် ၀ တ်ဆင်သည်, ခံတွင်းဖုံးအုပ်, အသုံးပြုသူများ၏နှာခေါင်းနှင့်မေးရိုး, PM2.5 ကာကွယ်တားဆီးဖို့, ဖုန်မှုန့်, formaldehyde, မော်တော်ကားအိပ်ဇော, စက်မှုဖုန်မှုန့်, အကာအကွယ်အတားအဆီးတစ်ခု၏ပြဌာန်းချက်မှတစ်ဆင့်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုတိုက်ရိုက်ကာကွယ်နိုင်သည်.
1. elastic band ကိုနားနောက်ဘက်သို့ဆွဲပါ, သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်မျက်နှာဖုံးနှင့် elastic band ကိုချိန်ညှိပါ.
2. မျက်နှာဖုံးကိုသင်၏လက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါ. မည်သည့်ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံးရဲ့အစွန်းကနေယိုစိမ့်လျှင်, အဘယ်သူမျှမဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်သည်အထိနောက်တဖန်မျက်နှာဖုံးကိုချိန်ညှိ.
3. အဆိုပါ elastic ခါးပတ်အဆင်ပြေအနေအထားမှ Adjust.
1. အသုံးမပြုခင်အထုပ်ကိုစစ်ဆေးပါ. အထုပ်ပျက်စီးသွားပါကမသုံးပါနှင့်.
3. မတော်တဆညစ်ပတ်, ကျေးဇူးပြုပြီးအချိန်ပေးပါ.
4. ကျေးဇူးပြု၍ ချက်ချင်းအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပါ။ အရေပြားအဆင်မပြေခြင်း (သို့) အဆင်မပြေခြင်းကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်.
[သိုလှောင်မှုအခြေအနေများနှင့်နည်းလမ်းများ] ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆနှင့်အတူထက်မပိုသောအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသိုလှောင်ထား 80% နှင့် -20 ℃နှင့် 50 between အကြားအပူချိန်, တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်သောဓာတ်ငွေ့နှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်, နှင့်ညစ်ညမ်းမှုရင်းမြစ်များနှင့်ဝေး.
[ဂရပ်ဖစ်၏ရှင်းလင်းချက်, သင်္ကေတများ, အတိုကောက်]
[သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေအနေများနှင့်နည်းလမ်းများ] စာချုပ်နှင့်အညီအထွေထွေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ; ထုတ်ကုန်မိုးသည်းထန်စွာဖိအားမှကာကွယ်သင့်သည်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်းတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်မိုးနှင့်ဆီးနှင်း.
[ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ] box ကိုပြပါ
[ထုတ်လုပ်သူ] ORICH ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ (Tianjin) Co. ,, Ltd မှ
[ထုတ်လုပ်သူလိပ်စာ] တောင်ပိုင်း.ရိယာ, block ပိတ်ပင်တားဆီးမှု, 16 Cuiming လမ်း, Yat-sen သိပ္ပံစက်မှုပန်းခြံ, TEDA, Tianjin.
[ထိတှေ့] တယ်လီဖုန်း: +86 400-6850-899
[ဝက်ဘ်ဆိုက်] http:// www.orich.com.cn